Computer Systems – Tagged "Gaming Keyboards" – ICT.com.mm
Wesdar MK10 Gaming Keyboard (Black)K21,000
ASUS ROG Claymore II Wireless Keyboard (RX Red Optical)K593,055
ASUS ROG Strix Scope NX TKL Gaming Keyboard Moonlight White (NX Brown)K395,704
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။6themes backlights 12 backlight models4LED brightness levels Adjustable pulsing rate LED lights 104 standard keys All non-conflict keys; 12 multimedia keys; adjustable input speeds...
Wesdar MK10 Gaming Keyboard (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ RGB light effect Multimedia control buttons Ergonomically designed palm rest6keys can be executed simultaneously without conflict. Cable Length: 1.5m Full Copper Button Lifespan: 8M USB...
ASUS ROG Claymore II Wireless Keyboard (RX Red Optical)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Key Switch: ROG RX RED Optical Mechanical Switch Connectivity: USB 2.0, RF 2.4GHz Size (Full/TKL): 100% Lighting: Per-Key RGB LEDs AURA Sync: Yes Anti-Ghosting: 100% Anti-Ghosting Macro...
ASUS ROG Strix Scope NX TKL Gaming Keyboard Moonlight White (NX Brown)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Key Switch: ROG NX: Brown Connectivity: USB 2.0 Size (Full/TKL): 80% Actuation Force: 43g Lighting: Per-Key RGB LEDs AURA Sync: Yes Anti-Ghosting: N-Key Rollover Macro Keys: All...
ASUS ROG Strix Scope NX TKL Gaming Keyboard Moonlight White (NX Red)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Key Switch: ROG NX: Red Connectivity: USB 2.0 Size (Full/TKL): 80% Actuation Force: 45g Lighting: Per-Key RGB LEDs AURA Sync: Yes Software: Armoury Crate Anti-Ghosting: N-Key Rollover...
HyperX Alloy Elite2Mechanical Gaming Keyboard (Red Switch)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: HKBE2X-1X-US/G Switch: HyperX Switch Type: Mechanical Backlight: RGB (16,777,216 colors) Light Effects: Per key RGB lighting2 and5brightness levels Onboard Memory:3profiles USB 2.0 Pass-through:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ PHYSICAL SPECIFICATIONS Length: 475 mm Width: 150 mm Height: 22 mm Weight (w/o cable): 1045 g Weight (w/cable): 1145 g PC Cable Length: 1.8 m TECHNICAL SPECIFICATIONS...
Logitech G813 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard (Linear)
Maxell CA-MKB Gaming Mechanical Keyboard RGB Illuminated
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: CA-MKB RGB Illuminated Keyboard High speed mechanical keys. Interchangeable keys, Easy Cleaning. Anti ghosting keys for games.2meter cable lined with USB port. Solid and...
HP K100 Wired Membrane Gaming Keyboard (Black)-5
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Connection type: USB Wired Number of Buttons: 104 Button Press Life: up to 10 million clicks Button Press Distance: 2.0mm Button Press Force: 55g (+-)7g Rated Voltage/Current:...
AULA F3287 Wired Mechanical Gaming Keyboard
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: F3287 Layout: 87 Keys Switches: Blue Switches Key Lifespan: 60 Million Times RGB Backlit Mode: 20 Board: Frosted Board Keyboard Type: Floating Size: 14.0*5*1.2 in Weight:...
HP GK600YS RGB Backlit Wired Gaming Keyboard (Black)-5
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Mechanical Switches4LED indicators RGB Lighting Matte Finish Double Injection Keycaps Magnetic ring to eliminate interfering signals and transmission error 50 million clicks ultra-long lifetime of...
AULA F2067 Wired Mechanical TKL Gaming Keyboard
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: F2067 Connection Method: USB Number of Keys: 87 Key Stroke: 4.0mm Blue Switch: 60±10gf Red Switch: 60±15gf Black Switch: 80±15gf Brown Switch: 60±10gf Button Life: 60 million...
AULA F2066 II Mechanical Gaming Keyboard Blue Switches
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model Number : F2066-II-Grey-Panel Brand : Aula Connectivity : USB Compatible with : PC & Laptop Color : Multi Color External Product ID Type : EAN-13 Keyboard...
AULA F2058 Retro Mechanical Gaming Keyboard Blue Switches
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: F2058 Brand : Aula Rainbow LED Lighting Compatible with : PC & Laptop Keyboard Language : English Connectivity : usb Package Dimensions: ‎47.2 x 16.4 x...
HP K120 Gaming Keyboard (Black)-5
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: HP Model: K120 Interface: USB Keys Windows Layout: 104 Keys Keyboard Backlighting: Rainbow LED Light Effect Cable Length: 1.6m Wired membrane keyboard User-friendly design with a...
Corsair K100 RGB Optical-Mechanical Gaming Keyboard OPX Switch(Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Stock Code: CS-CH-912A01A-NA Special Feature Lighting Compatible Devices Gaming Console Brand: Corsair Color: Black Number of Keys: 110 Style: Optical Item Dimensions: LxWxH 19.3 x 3.2 x 9.4...
Corsair K70 RGB MK2 Rapidfire Mechanical Gaming Keyboard (Cherry MX Speed)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Keyboard Backlighting: RGB Keyboard Layout: NA HID Keyboard Report Rate: 1000Hz Key Switches: CHERRY MX Speed USB Pass-Through: USB 2.0 Type-A Matrix: 104 Keys Keyboard Connectivity: Wired...
Corsair K70 RGB MK2 Blacklit Mechanical Keyboard (Cherry MX Brown)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Stock code: CS-CH-9109012-NA Connectivity Technology: USB 2.0 Compatible Devices Gaming Console Brand: Corsair Series K70 RGB MK.2 Mechanical Gaming Keyboard - Cherry MX Red Color: RGB Number...
Corsair K70 RGB MK2 Blacklit Mechanical Keyboard (Cherry MX Blue)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Stock code: CS-CH-9109011-NA Connectivity Technology: USB 2.0 Compatible Devices Gaming Console Brand: Corsair Series K70 RGB MK.2 Mechanical Gaming Keyboard - Cherry MX Red Color: RGB Number of...
Corsair STRAFE RGB MK2 Mechanical Gaming Keyboard (Cherry MX Red)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Gorgeous design Key switch selection High-quality components Helpful extra features Warranty:2Years 100% Cherry MX Mechanical Switches Delivering smooth, linear response with precise actuation, CHERRY MX...